Yusuf Garaad: Raila oo dhaliilay tabta Booliiska Kenya
Raila oo dhaliilay tabta Booliiska Kenya
Soomaalida sida loola dhaqmayo caddaalad ma aha
Ra’iisal Wasaarihii hore ee Kenya, Raila Odinga, ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado, welibana walaac ka muujiyay tabta ay Booliiska Kenya adeegsanayaan marka ay si gooniya u bar tilmaansanayaan Soomaalida.
In dadka Soomaalida la soo ururiyo oo xero la isugu geeyo si loo kala saaro, ma ahan dow, ayuu yiri.
Wuxuu ku tilmaamay in ay arrintaasi tahay mid caro ku dhalin karta qowmiyadda Soomaalida.
Ra’ila Odinga oo hadda socdaal ku jooga dalka Mareykanku wuxuu saxaafadda Kenya u sheegay in loo baahan yahay in hey’adaha Sirdoonka iyo Booliska Baarista Dembiyada CID loo baahan yahay in ay xog raadiyaan oo ay soo qabtaan dadka arga-gixisada ah, ka hor inta aanay fal geysan.
Waxaan ka warqabnaa, ayuu yiri, in qowmiyado kale oo badan oo Kenya ah laga helay shakhsiyaad ka tirsan al Shabab. Sidaa darteed caddaalad ma ahan, ayuu yiri, in Soomaalida gaar loo bartilmaansado.
Wuxuu Raila ku tilmaamay in arrintaasi caddaalad darrada ka sokow ay keeneyso laba dhibaato oo kale.
Marka hore waxay caro gelineysaa ayuu yiri dadka Soomaaliyeed, oo u arkaya in la faquuqay oo si aan caddaalad ahayn in loola dhaqmay.
Marka labaadna, Soomaalida Kenya ayaa waxay ku dhalineysaaa in ay dareemaan in aanay la xuquuq ahayn dadka kale ee Kenya. Jawaabna ma aham mana noqoneyso, ayuu yiri, in la yiraahdo lama kala yaqaan Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya. Wuxuu is weydiiyay su’aal. Wuxuu yiri – Oo yaa kala yaqaan Masai Kenya iyo Masai Tanzania?
Dhanka kale, wuxuu ku baaqay in ay dowladdu dib u habayn ku sameyso Booliiska, Sirdoonka iyo Garsoorka oo uu ku tilmaamay in qofka tuhun arga-gixisnimo lagu soo qabto ay damiin ku sii deynayaan, taas oo keeneysa in qofkii uu markaas fuliyo fal arga-gixiso.
Hey'ad Xuquuqda Aadanaha u doodda, Human Rights Watch, ayaa iyaduna ugu baaqday Kenya in ay joojiso howlgalkan. Waxay ku tilmaantay in ay booqatay Saldhigga Booliiska Pangani oo ay aragtay meel loogu tala galay 20 maxbuus laakiin ay ku jiraan dhowr boqol oo qof. Waxaa kale oo ay sheegtay in ay aragtay Booliis karbaash la dhacaya dad xiran, hadallo gef ahna kula hadlaya.
Ilo lagu kalsoonaan karo waxay hadda sheegayaan in howlgalku uu aad isu dhimay, dadkii xirnaana intooda badan lagu sii daayay siyaabo kala duwan qaarna loo dhoofiyay Soomaaliya.
Wareysiga Raila Odinga oo af Ingiriis ah, soconaya 16'36" arrinta Soomaaliduna ay tahay su'aalaha badan ee la weydiiyay mid ka mid ah, waxaad ka dhegeysan kartaa adiga oo dhag siiya sawirkiisa hoose.
Posted by Yusuf Garaad at 12:14:00
Talo Saaxiib Facebook
Xamar Lagaama Xigo - Qaybta Koowaad
Wasiirro la kulmay dhallinyaro